ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်လှလှလေးတွေကြောင့် မနာကျင်စေလို . . . – Good Health Journal
ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်လှလှလေးတွေကြောင့် မနာကျင်စေလို . . .
မိန်းကလေးတွေမှာလည်း တစ်ယောက်အကြိုက်တစ် မျိုးစီမို့ တချို့က ဒေါက်မြင့်လေကြိုက်လေဖြစ်ပြီး တချို့က လည်း ခပ်ပါးပါးလေးစီးရတာကို ပိုနှစ်သက်တာလည်း ရှိပါ တယ်။ ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိရာမှာ ကွာလတီနဲ့ ဒေါက် အမြင့်ပေါ်မူတည်ပြီး ဘယ်လိုပုံစံဒေါက်မြင့်ဖိနပ်ပဲဖြစ်ဖြစ် စီး တာကြာရင် ခြေထောက်လေးတွေ နာကျင်ရမြဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ပတ်မှာ ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်တွေကြောင့် နာကျင်မှုသက်သာ စေဖို့ နည်းလမ်းတွေကို ရေးပေးလိုက်တယ်နော်။
ဖိနပ်ဆိုက်မှန်အောင်ရွေးချယ်ပါ၊ အရှည်ဆုံး ခြေချောင်းနဲ့ ဖိနပ်ထိပ်ကြားမှာ နေရာလွတ်ရှိဖို့လိုပါတယ်။ ဒါမှ ဒေါက်မြင့် ရှူးဖိနပ်ကြောင့် ခြေချောင်းလေးတွေ မနာကျင်မှာပါ။ သင့်ခြေ ထောက် အကျယ်ထက် သေးတဲ့ဖိနပ်မျိုးလည်း မဖြစ်ပါစေနဲ့။
ဖိနပ်ကို ပြုလုပ်ထားတဲ့ အသားကလည်း စကားပြောပါ တယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ လယ်သာအသားနဲ့ ချုပ်လုပ် ထားတဲ့ ဖိနပ်တွေက Synthetic ထက် ပိုပြီး သက်သောင့် သက်သာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ် trick တစ်ခုကတော့ ကွာလတီကောင်းတဲ့ insole cushion ကို ခံစီးပါ။ သူက လမ်းလျှောက်လိုက်တိုင်း မှာ ခြေဆစ်လှုပ်ရှားမှု ထိခိုက်မှုနည်းအောင် ထောက်ပံ့ပေးနိုင် ပါတယ်။
သင်ရဲ့ လမ်းလျှောက်တဲ့ ပုံစံကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်စီးပြီး လမ်းလျှောက်တဲ့ပုံစံ မမှန်ရင်လည်း ခြေ ထောက်တွေပေါ် ဒဏ်ပိုပိစေပါတယ်။ ဒီအတွက် ခန္ဓာကိုယ်ကို မတ်မတ်အနေအထားအတိုင်းလျှောက်ပြီး Core Muscle ကြွက်သားတွေကို အဓိက အသုံးပြုပါ။
အနံ့ပျောက်ဆေး (Deodorant) ကို ရှူးဖိနပ် အနောက်
ဘက်နဲ့သင့်ခြေထောက်ကို ဖျန်းပေးပါ။ ဒါကလည်း
သင့်ခြေထောက် ပွန်းပဲ့တဲ့ ဒဏ်ကို